Hotellọ nkwari akụ “Grand Dame” nke ugwu ugwu kachasị dị na ụwa ga-amaliteghachi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Hotellọ nkwari akụ “Grand Dame” nke ugwu ugwu kachasị dị na ụwa ga-amaliteghachi
Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ kacha ọhụrụ na Norway • Mmelite nke Njem njem
Nke mbụ mepere na 1870 ịnabata ndị Britain mara ọchịchị n'ịchọ azụ salmọn kachasị mma n'ụwa, nke Trondheim Annlọ nkwari akụ Britannia ga - emepe ọzọ na Eprel 1 mgbe emezigharị ọtụtụ nde $ 160. Obodo dị nso na Trondheim, nke dị nanị 60 kilomita n'ebe ndịda nke Arctic Circle, bụ obodo nke atọ kacha buo ibu na Norway, ebe obibi 200,000.
Annlọ oriri na ọannụ Britụ Britannia anabatala ndị ọbịa a ma ama site na ndị isi nye ndị mmeri Nobel, na Queen Elizabeth II na Duke nke Edinburgh, na Beyonce na Jay-Z.
Nlọghachi nke Britannia bụ ọgụgụ isi nke onye na-ahụ maka ego na Norwegian, Odd Reitan, onye a mụrụ na Trondheim na 1951 na onye, ​​mgbe ọ dị afọ 14, zụlitere nrọ nke ịnweta ụlọ nkwari akụ ahụ. Ọ atụmatụ pụtara ìhè na Forbes na Bloomberg ndepụta nke billionaires zuru ụwa ọnụ.
Geoffrey Weill kwuru, sị, “Obi dị anyị ụtọ na a gwara anyị ka anyị nọchite ụlọ nkwari akụ a pụrụ iche, na-agbakwụnye ya n'ihe ndekọ anyị banyere ụfọdụ 'ụlọ nkwari akụ ndị kasị mma' bụ́ nke ụwa nwe.”
Otu onye Onye ndu Hotels nke uwa, Britannia ga-enye ime ụlọ 246 na ime ụlọ iri na otu, ụlọ nri isii na ụlọ mmanya - gụnyere ụlọ ikpe nkwụ mbụ ya, spa, mgbatị ahụ na ọdọ mmiri ime ụlọ. Lọ nkwari akụ ahụ ga-enye ndị ọbịa teknụzụ kachasị ọhụrụ, nyocha ụda, TV zoro ezo n'ime enyo, yana ihe eji enyere ndụ na ọkụ nke a na-aghọta ma rụọ ọrụ.
Britannia ga-abụ emume eji arụ ọrụ aka na ihe osise na ngwa ọrụ Norwegian na Scandinavia. Akwa dị site n'aka onye na-ehi ụra nke Swedish, Hästens. Ime ụlọ ịwụ bụ oriri nke marble Carrara.
Na etiti nke Britannia ga-abụ ụlọ nga Palm-domed iko, nke izizi ekpughere na 1918 na ogologo oge nzukọ Trondheim maka ndị na-elekọta mmadụ, ndị nka, ndị egwu na ndị ọgụgụ isi. Courtlọikpe nkwụ na-abịaghachi ga-anabata nri ụtụtụ, nri ehihie, brunch, tii ehihie na nri abalị - na-enye ego njem Scandinavian.
Ọ bụ Christopher Davidsen, onye amụrụ na obodo Norwegian nke Stavanger na 1983 na onye isi mmeri ọla ọcha nke Bocuse d'Or na 2017. Ndị isi Davidwin ga-abụ Speilsalen mara mma, ụlọ oriri na ọ signatureụ signatureụ mbinye aka mbụ ya. Brasserie Britannia ga - abụ French a ma ama, nke Paris na Lyon na Balthazar nke New York. Jonathan Grill bụ ụlọ oriri na ọ casualụ restaurantụ a na-ahụkarị na Japan, Korea na Norway. Marble na kristal Britannia Bar na-atụ anya ka ọ bụrụ mmanya mmanya na ebe ezumike Trondheim nke abalị.
Ogwe mmanya mmanya Vinbaren - ya na okpuru ulo 8,000 - ga-enye ebe ezumike, ime ụlọ na-atọ ụtọ na mmanya na-enye tapas, charcuterie na chiiz.
Britannia Spa & Fitness nwere nnukwu ọdọ mmiri ime ụlọ, ọtụtụ saunas, ụlọ ọgwụgwọ ise na ndị na-azụ onwe gị. Hotellọ nkwari akụ ahụ ga-enyekwa ọgbara ọhụrụ ogbako na ebe a na-egwu egwu.
briton brunch eme ememe ememe gburugburu classic ogbako ikpe okike ihe oriri ọnwụ design nri abalị nrọ Edinburgh mara ụlọ ọrụ oriri azu mma Forbes French iko Grand imi home usu II ime ụlọ n'ike mmụọ nsọ Ndepụta Ngwaahịa Japan Korean Onye ndu Hotels nke uwa ezumike Lyon nzute so ọtụtụ puku ndị egwu nbsp New York Norway Norwegian odighi àjà meghere n'otu ntabi anya Paris Ugochukwu onye ọdọ mmiri adịchaghị ndị isi -agbata n'ọsọ Queen Queen Elizabeth Queen Elizabeth II ibidoghachi mmeghari ohuru weghachite restaurant ụlọ oriri na ọṅụṅụ ụlọ ụlọ kwuru scandinavian search mbinye aka -ada spa ọpụrụiche ihe ngosi oke ime Swedish igwu mmiri ebe igwu mmiri akatabi okop tii technology ọgwụgwọ TV kpughere welcome nabatara mmanya -eto eto mmeri kacha mma n'ụwa York